Shanqadh waliba waa Shabeel – Kaasho Maanka
Shanqadh waliba waa Shabeel
Suurayso bal akhristow aniga iyo adiga oo maanta ku laabanay kumannaan sano kahor iyo waqtigii awoowayaasheen ay ugaarsatada ahaayeen. Maalin maalmaha kamid ah anaka oo kaynta dhex soconna haddaan maqalno shanqar geedaha ka dhex yeeraysa iyo cawska oo lulanaya
Kadib adigu aad tiraahdid war meesha Shabeel baa inoogu dhuumanaya si uu inoo kala gooyo ee inaga dhaqaaji, anigana aan kuugu jawaabo war saaxiib dhib malahan waxa meesha luxaya waa iska dabeelo ee caadi iska dhig.
Kawarran waxa meesha ka shanqaraya haddii ay dabeelo iska noqdaan oo meesha uuna bahal ku jirin? Dabcan waxba dhici maayaan labadeenabane caawa si nabad baan ku hoyanaynaa dhacdadana waan iska illoobaynaa.
Laakiin bal kawarran haddii waxa meesha ka shanqaraya ay noqdaan Shabeel noo dhuumanaya? Waxay u badantahay in uu aniga i kala goynayo maadaama aan waxba iska filayn, meesha aad adiga badbaadaysid maadaamaad taxadar meesha ka muujinaysay oo digtoonayd.
Haddaad badbaadid ood sii tafiirmatid waxay u badantahay in aad ilmahaaga ama ay kaa dhaxlaan taxaddar saa’id ah amaa aadba ku barbaarisid in meeshii shanqadhaba uu Shabeel ku jiro.
Markaa is waydii akhristow maxaa ka dhalan kara dad wada dhiifoon oo digtooni saa’id ah ku jira oo wixii shanqadhaba xumaan ku soo socota moodaya oo ayaka oona waxba hubsan didaya?
Dabcan dadka sidaa ah hadafkooda ugu horreeya noqon maayo in ay runta iyo beenta kala saaraan ama ay cilmi wax u yeeshaan ee wuxuu noqonayaa uun sidee baad u badbaadaa.
Midda xigta, waxa ka dhalanaya in ayna dadkaasi dabeecaddoodii ahayd shanqadh walba shabeel baa ka dambeeya ayna kaynta ugaga soo tagin oo ay baladka keenaan adduunka dhanna ay sharcigaas ku xukumaan.
QORMO LA XIRIIRTA: Falsafadda Siyaasadda ee Spinoza
Gugac marka uu soo yeero oran maayaan war waxaan maxay ahaayeen ma naqaano ee bal aan ka gun gaarno ee waxay leeyihiin waxbaa caadka ku dhex jira oo meesha dube la dhacaya oo anaka xumo nala raba.
Folkaano ama dhul-gariir hadday dhacaan waxan wax iska dabiici ah oo aana anaka naloola dan lahayn amee yihiin is waydiin maayaan oo run raadin u maryo qaadan maayaan ee waxay leeyihiin waxaan la arkayn baa meesha ku jira oo gabigeen ama qaarkeen ay ka xanaajiyeen oo xume nala doonaya!
Intaas bas kuma ekaanayaan dadka noocaas ah ee xattaa dhexdooda ayee ka bilaabanee oo midkood hadduu kakale ugaga istaago lugta si ka’ma ah, ka kale wuxuu suuraysanaa in kas loogu istaagay oo dhagar loo maldahayo. Runtana raadin maayo ee walaalkiis buu warmaha u qaadan.
Bini’aadamka maanta nool wuxuu kasoo tafiirmay ninkii shanqarta ka diday ee wixii dhaqaaqaba Shabeel iyo wax xuma la doonaya moodayay, marka sidaa darteed la yaab malahan in uu diimo iyo hab dhaqameedyo u jeedkoodu uuna ahayn run raadin balse uu yahay sideen ku badbaadnaa uu samaysto.
Dhiifoonaada ma xumo laakiin amaa naloo qaatay in aan fulaynimadaan iska dayno oo anakoo taxadar muujinayna qayladii soo yeertaba aan ka gun gaarno oo hadafkeenu noqdo run raadin intaan oran lahayn wax aana la arkayn baa meesha ku dhuumanaya!?
Sharciga saddexda heer ee garaadka bulshada
W/Q: Jaabir Arab
harciga saddexda heer ee garaadka bulshada “law of three stages of Auguste Comte”, waa fikrad uu dhigay faylasoofka caanka ka ah cilmiga bulshada “sociology” ee Auguste Comte buuggiisa la yiraahdo “دورة الفلسفة الايجابية” “The Course in Positive Philosophy”. Fikraddaas waxay daaran tahay bulsho kasta waxay martaa sadex heer oo tadawur fikir ah...
Falsafadda Spinoza waxay ka koobantahay qaybo badan oo muhim ah, waxaanse ku soo koobi lahaa laba qaybood oo aan isleeyahay waa ugu muhiimsan yihiin, labadaas qaybood oo kala ah falsafadda diinta iyo tan siyaasadda. labaadaas qaybood oo si faah-faahsan uu kaga hadlay buuggiisa caanka ah ee Ethics ama Ethica. Sida ay caanka ku ahaayeen aqoon yahamiintii iftiinka ee qarnigii 17-naaad iyo 18-naad...
Falsafadda Siyaasadda ee Spinoza
Wixii ka horreeyay kacaankii faransiiska Yurub iyo adduunka waxaa ka talin jiray maamulo siyaasi ah oo ku dhisan kaligi-talisnimo, kuwaas oo ahaa kuwo u dhaxeeya boqorrada iyo diimaha am raga diinta. sidaas darteed aqoon-yahamiintii iftiinku waxay xil wayn iska saareen in falsafaddu meel u yeesho arrintaas iyaga oo xoogga saaray maadada falsafadda siyaasiga ah ((political philosophy). Hadaba Ba...
W/Q: Saacid Kaahiye 4th August 2020